Kaalaandarii Oromoo maaltuu kaaniin adda taasisaa? – Kichuu
HomePhoto GalleryKaalaandarii Oromoo maaltuu kaaniin adda taasisaa?
Henni (kaalaandaariin) Oromoo Booranaa kan aadaa fi haala jiruuf jireenya uummata Booranaa waliin walitti hidhama cimaa qabu fi sirna gadaatiif illeen utubaa ta’usaa, qorattoonni seenaa ni dubbatu.
(bbcafaanoromoooduu) —Kaalaandarri Oromoo guyyaa fi ji’a lakkaa’uun alatti seenaa uummamaa fi wal duraa duuba uumama waaqaa of keessatti qabata jedhu Obbo Jaatanii Diidaa qorataan seenaafi aadaa Oromoo.
Kaalaandariin Oromoo lakkoofsa guyyootaatiin alattis aadaafi haala jiruufi jireenya uummata Oromoo akka ibsu qorattoonni seenaa ni dubbatu.
Viidiyoo kana dowwadhaa. ‘Share’ ‘Like’ ‘Comment’ itti roobsaa.
Akkasumas odeessa dabalataatiif geessituu kana cuqaasaa